Indlu yosapho 4 Pers @Borgo Castello Panicaglia
Nocera Umbra, Umbria, Italy
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguAlbert
Idolophana ephakathi kwe-Borgo Panicaglia yinqaba ekhethekileyo evela kwi-1266. Kwindawo ephakamileyo yeemitha ze-800, ngombono weentaba ze-Umbrian, uya kuba namava angavamile kwaye amahle. Yindawo enoxolo apho ungaphumli kwaye uzonwabele kuphela, kodwa apho unokuthatha inxaxheba kwincasa yewayini, ukuzingela iitruffle, iiklasi zokupheka okanye izifundo zolwimi lwesiTaliyane. Phumla nje! Thatha idiphu equleni okanye ufunde incwadi kwenye yeebhedi zokuphumla.
Sifuna abantu bayo yonke iminyaka bazive ngathi basekhaya e-Borgo Castello Panicaglia. Ngelixa uyonwabele iglasi emnandi yewayini yase-Italiya, siyaqinisekisa ukuba abantwana nabo banalo ixesha lobomi babo. Ukongeza kwiqula lokuqubha kunye nebala lokudlala, imisebenzi yabantwana icwangciswa iveki yonke ngexesha leeholide zesikolo. Ngaphandle kweeholide zesikolo, i-Borgo Castello Panicaglia ayisiyiyo kuphela indawo efanelekileyo yomtshato, iiveki ze-yoga, ukuhamba ngebhayisikile kunye neeholide zokuhamba, kodwa kunye neempelaveki zothando kunye nezokupheka kude ezimbini.
I-Umbria ibizwa ngokuba yintliziyo eluhlaza yase-Italy. Igama elifanelekileyo xa uqwalasela iinduli ezigqunywe ngamahlathi kunye namasimi azele imidiliya kunye nemithi yomnquma. Kodwa i-Umbria ingaphezulu nje kohlaza. Amasimi azele zizityalo ezityheli ezidubulayo zelentile, amasimi epoppy abomvu, amachibi abhlowu, imilambo kunye nemisinga yeentaba. Kwaye ekwindla, ngokuqinisekileyo, imibala emihle ebomvu, i-orange kunye ne-brown yemithi. I-Umbria ayinazo iipaki zesizwe ezingaphantsi kwesibhozo kwaye nangona ingekho elwandle, inamanzi amaninzi. ILake Trasimeno, elona chibi likhulu kumbindi we-Itali, umlambo iTiber kwaye ngokuqinisekileyo iingxangxasi ezinkulu zase-Itali, iCascate delle Marmore. Obu buhle bendalo bugqithisayo kunye neemeko zemozulu ezifanelekileyo zenza lo mmandla ulungele kakhulu imisebenzi yangaphandle. Ukongeza kokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisikile, unokuphinda uhambe nge-rafting, i-windsurfing, ukukhwela ihashe kunye ne-hang gliding. Iidolophu zamaxesha aphakathi kunye neelali ezinezindlu zoonongendi kunye neecawe zizisa imbali etyebileyo yenkcubeko ye-Umbria ebomini. Akufanele uphoswe inani lezixeko ezikule ndawo ngexesha lokuhlala kwakho e-Borgo Castello Panicaglia. Ndwendwela iPerugia entle, iAssisi, iOrvieto, iNorcia kunye neSpoleto. Ukongeza, i-Umbria imnandi kubahambi, abahamba ngeebhayisikile kunye neentsapho ezinabantwana.
Umbuki zindwendwe ngu- Albert
Kuhlala kukho umntu ovela kwiqela le-Borgo ukuba akwamkele kwaye, ukuba uyanqweneleka, ukuphendula imibuzo, ukunika iingcebiso kunye nencoko emnandi.